Shandong Hualu Home Furnishing Technology Co., Ltd. waa hoosaad Shandong Huajian Aluminium Group. La aasaasay 2017, waa shirkad isku dhafan naqshadeynta iyo cilmi-baarista iyo horumarinta astaamaha guryaha, qaab-dhismeedka qurxinta iyo agabka, qaab-dhismeedka hannaanka, tababarka dhismaha iyo hagidda, iibinta suuqyada iyo dhiirrigelinta astaanta Shirkad isku-dhafan iyo ka-shaqeynta nidaamka guryaha aluminium ee leh adeegyo.
Noocyada Aluminium ee Guud
Daaqada daawaha ee aluminium ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa berrinka injineernimada dhismaha sababtoo ah quruxdiisa, daboolida iyo xoogga sare. Kadib daaweynta dusha sare, muuqaalka aluminiumku waa mid dhalaalaya oo dhalaalaya, oo muujinaya midabyo iyo saameyn kala duwan.
Daaqada Aluminiumka Joogtada ah & Albaabka
Ma ogtahay in astaamaha jabsiga kuleylka si aad ah aan loo isticmaalin tobaneeyo sano? Waad ku mahadsan tahay shirkadaha sida Huajian Technologies, mashiinnada loo baahan yahay in lagu farsameeyo astaamaha kuleylka kuleylka ayaa hadda si ballaaran loo heli karaa. Laakiin kaliya waa maxay kuleylka kuleylka, maxaase u yahay war sidan u weyn?
Aluminium daaqadda iyo albaabka
Shandong EOSS Windows & Albaabada Nidaamka Teknolojiyada Co .. Ltd waxaa iska leh shirkadda Shandong Huajian Aluminium Group Co., Ltd, waxay inta badan ku hawlan tahay horumarinta daaqadaha, albaabada iyo nidaamka darbiyada daahyada iyo naqshadeynta qalabka qalabka, soo saarista, iibinta & rakibaadda, e- ganacsiga, horumarinta softiweerka, iibka iyo adeegga.EOSS waxay ku soo ururineysaa injineer heer sare ah ee Shiinaha qaybta Fenestration.
Foomka Shaqada ee Aluminium
Maaddaama ay tahay qaab dhismeed cusub sannadihii la soo dhaafay, dhismaha qaab-dhismeedka aluminium waxaa lagu arki karaa waddammo aad iyo aad u horumarsan oo adduunka ah, waxay ka sarreysaa qaab-dhaqameedka maadada, saameynta dhismaha, miisaaniyadda kharashka, nolosha adeegga, ilaalinta deegaanka iyo wixii la mid ah. Isla mar ahaantaana, waxay yareyn kartaa kharashka mashruuca, waxay hagaajineysaa tayada injineernimada, waxay dedejineysaa muddada dhismaha waxayna ka fogaan kartaa qaladka aadanaha ee habka dhismaha, ka dib marka laga saaro guddiga iyada oo aan qashinka injineernimada haraaga ah, si loo helo badbaado iyo jawi shaqo ilbaxnimo ee shaqaalaha dhismaha.